माझीका वर्षभरिका सबै दिन उस्तै ! फुर्सद र धन भए पो चाडपर्व ? - माझीका वर्षभरिका सबै दिन उस्तै ! फुर्सद र धन भए पो चाडपर्व ?
माझीका वर्षभरिका सबै दिन उस्तै ! फुर्सद र धन भए पो चाडपर्व ?
२०७५, २6 भदौ, 05:32:16 AM
पर्वत । शहर बजार जताततै तीजको रौनकले छपक्कै छोपेको छ । दैनिकजसो दर खुवाउने, खाने, मेला महोत्सव गर्ने, शुभकामना आदानप्रदान गर्नेलगायत कार्यक्रमले भ्याइनभ्याइ छ ।
कुश्मा नगरपालिका–१ पाङको माझी बस्तीका चन्द्रकुमारी माझीलाई भने तीजको कुनै वास्ता छैन । उनी लगायत माझी बस्तीका महिला तथा पुरुष कालीगण्डकी किनारमा बालुवा छान्नमै व्यस्त छन् ।
“दिनभर बालुवा नछाने भोकै बस्नु पर्छ,” चन्द्रकुमारीले भनिन, “हाम्रा लागि वर्षभरिका सबै दिन उस्तै हुन् । फुर्सद र धन भए पो चाडपर्व ।” पोखरा–बागलुङ राजमार्गअन्तर्गतको कालीगण्डकी किनारमा करीब १५० माझी परिवारको बसोबास छ ।
पोखरा–बागलुङ सडक निर्माणका क्रममा २०४८ सालमा धादिङ, गोरखा र तनहुँलगायतबाट आएका उनीहरु यही छाप्रो बनाएर बसेका हुन् । उनीहरूसँग न त लालपूर्जा छ न गाँसको नै ठेगान । राजमार्गको काम सकिएपछि माझी बेरोजगार बनेका हुन् ।
“उर्लेको कालीगण्डकीमा जोखिम मोलेरै बालुवा निकाल्नु पर्ने बाध्यता छ,” स्थानीयवासी कला माझीले भनिन । नियमित आम्दानीको स्रोत नभएपछि बालुवा निकाल्ने र गिट्टी कुट्नु बाहेक अन्य विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।
वर्षाका बेला कालीगण्डकीको भेलले बगाउने बालुवा किनारमा थुपारेर हिउँदभर बेच्ने उनहरुको मुख्य पेशा हो । “बर्खामा बाढी आउँदा बालुवा निकाल्नै सकिन्न,” कलाले भनिन, “बालुवा नछाने भोकभोकै बस्नु पर्छ ।” महिला बिहानैदेखि बालुवा निकालेर नदी किनारमा थुपार्छन् । केहीले बङ्गुर र कुखुरा पालेका छन् ।
कुश्मा, बागलुङ र बेनीका निर्माण व्यवसायीले माझीबाट प्रतिट्याक्टर रु तीन हजारदेखि रु पाँच हजारमा बालुवा खरिद गर्छन् । व्यवसायीले सो बालुवा बजारमा रु १० हजारसम्ममा बिक्री गर्छन् ।
बालुवा बिक्रीमा व्यवसायीले लगाएको एकाधिकारकै कारण श्रमिकले सिधै बिक्री गर्न पाउँदैनन् । यहाँका बालबालिकाले पढ्न पाएका छ्रैनन् । विसं २०६३ मा स्थापना गरिएको विद्यालयमा ३ कक्षासम्म मात्र पठनपाठन हुन्छ ।
उपल्लो कक्षा पढ्न बागलुङ सदरमुकाम पुग्नु पर्छ । त्यहाँसम्म दैनिक आउजाउ गर्दा रु २० बस भाडा तिनुपर्छ । भाडा तिर्न नसक्दा कतिपयले छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउने गरेका छैनन् ।
वडा सदस्यकै नेतृत्वमा बालुवा तस्करी !
तस्करी बढेपछि ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खननमा रोक, जरिवाना ५० हजार पुर्याउने तयारी